Master Gims, ane zita chairo Gandhi Djuna, anozivisa zvese nezvemaziso ake - teles relay
Master Gims, zita chairo Gandhi Djuna rinoratidza zvese nezvemaziso ake
Master Gims, ane zita chairo Gandhi Djuna, akazvarwa May 6, 1986 muKinshasa, Congo. Baba vake Djuna Djanana muimbi mudura raPapa Wemba uye mukomana mudiki anoridzirwa nemimhanzi kubva paudiki hwake
Akasvika muFrance aine makore maviri, Maître Gims akakurira muParis mudunhu reBac-et-Métiers ipapo akananga kuPoissonnière asati asvika muna 2 mukuronga. Passionate nezve hip-hop, anoteerera kwaNate Dogg, Marvin Gaye, Michael Jackson, 50 Cent uye Eminem.
Ndichiri kukoreji, Maître Gims, nhengo ye3e Prototype akaungana, akatanga kukwikwidza neve Sexion d'Assaut, mubatanidzwa uyo waive nenhengo dzinosvika makumi matatu. Kwemakore, pakati pekusununguka uye nhanho dzakavhurika, vechidiki vadiki vanopinza maitiro avo. Paaive achinyora zvinyorwa zvake, Maretre Gims akatanga kudzidza kutaurirana uye grafiki dhizaini. Pakutanga, nhengo dzeBondeion d'Assaut dzakaburitsa mazita adzo ekutanga seyakasununguka vasati vasangana neDawala, muvambi weWati B label muna1999, uye akava maneja wavo.
Muna 2005, Maître Gims nevamwe vake 3e Prototype vakaburitsa mixtape yavo yekutanga, "Nyika yepakati", iyo rapper inodhira chifukidzo pachayo. Izvo zvinovatendera kuti vazvizivise munyika ye rap. Muna 2006, Maître Gims vakapinda mu12 Inch'All Star, iyo yakakurumbira hondo yepasirese yepasi, kwaakaita zvinoshamisa. Pakupera kwegore, muimbi akaburitsa solo yake yekutanga, "Vaya vanovata nemeso akavhurika".
Muna 2008 panobuda "Le Renouveau", yekutanga mugwagwa albhamu inonzi 3e Prototype, pamberi "Les Chroniques du 75 Vol.1" gore rinotevera. Rakatsveneswa mahara paInternet, iyo bhaisikopo inotorwa kanopfuura ka30 times. Vhoriyamu 000 yakaburitswa muna 2. Na "Kupwanya musoro", yakaburitswa munaMay 2009, 3e Prototype inopa nzira kune iyo Sexion d'Assaut, inoenda kubva kuboka kuenda kune yakazara yakazara boka. Rwendo rwavo rwekutanga rwatova kubudirira kukuru.
La Sexion, kubva ku "Chikoro" kuenda ku "L'Apogée"
Maive muna Kurume 2010, paine iyo albhamu "Chikoro chakakosha mapoinzi", kuti iyo Sexion d'Assaut inozivikanwa kuruzhinji. Pane iyi opus, Maître Gims anozivikanwa nemunyori, muimbisi uye mutambi. Yakatengesa makopi anopfuura 19 mumavhiki ekutanga aburitswa, iyo albhamu, iyo yakazova dhayamita disc, inosanganisira akawanda hits kusanganisira "Tine hurombo", "Cap mukati kunze", "Waty By Night" kana kana "My real guy".
Iri boka rinobva ravhurira boka NMA yeboka kuPar des Princes, uye rinoitazve muFrance yose. Nedambare "The Iyogee."»,, Yakaburitswa muna Kurume 2012, mitezo yeBondeion d'Assaut inosimbisa chimiro chavo senyeredzi dzeFrance rap. Nekuda kweopus iyi, iyo yaitengesa kupfuura mamirioni emakopi, boka rakakunda dhadha dhiza ndokuzadza Zénith de France.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://afriqueshowbiz.com/maitre-gims-le-chanteur-dit-tout-a-propos-de-ses-yeux/
zita chairo Gandhi Djuna rinoratidza zvese nezvemaziso akezita rake chairo Gandhi Djuna rinoratidza zvese nezvemeso akeMaitre GimsMaster Gims
Ndokusaka Amber Heard akapfeka mucheka mutsvuku mazuva ose